» १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीबारे नयाँ सरकारको चासो, के हुँदैछ काम ?
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीबारे नयाँ सरकारको चासो, के हुँदैछ काम ?
२०७८ श्रावण ७, बिहीबार १९:४०
काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई गति दिन सरकारले सक्रियता देखाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको भनिए पनि आशातितरुपमा काम अगाडि नबढेपछि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी आवश्यक पहल थालेको हो ।
यो सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल आयोजनाको रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन ।
सरकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले लामो समयदेखि आयोजनाको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ? भन्ने जिज्ञासा राखेकि थिइन्। स्थानीय आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्न, उनीहरूलाई नियमानुसार खुशी बनाएर काम शुरु गरिहाल्नुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले सुस्त गतिमा अगाडि बढेको पुनर्वास र घरगोठको मुआब्जाबारे पनि शीघ्र निर्णय गर्न निर्देशन दिइन । बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालसँग भेट गरी समस्या समााधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
आयोजना निर्माणका भन्दै लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ । सो करबापत हालसम्म करीब ४५ अर्ब बराबरको रकम जुटिसकेको छ ।
स्थानीयवासीले आयोजनाको नाममा आफूहरूलाई समस्यामा पारिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । गोरखा क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि अधिकारी नेतृत्वको स्थानीयवासीको प्रतिनिधिमण्डलले आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन र सहजीकरण गर्न माग गरेको थियो । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले आयोजना निर्माण हुने भनिएकै लामो समय भए पनि काम शुरु नभएको भन्दै चिन्तामिश्रत गुनासो गरे ।
सो क्रममा मन्त्री भुसालले सरकार आयोजनालाई अघि बढाउन गम्भीर रहेको र सोहीअनुसार पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले आयोजनाको स्थानीय काम अघि बढाउन आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिँदै हाल उत्पन्न कानूनी तथा प्राविधिक समस्या समाधानमा तीव्रता दिइने बताए । फिल्डबुकमा विवरण भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गा, ह्रसकट्टी, भौतिक संरचना र घरगोठका विषयमा शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री भुसालसँग सोही विषयमा छलफल भएको संयोजक कार्कीको भनाइ छ ।